ဘယ်အချိန်မှာဂျုံ,မုယောစပါး, ငရုတ်သီးစိမ်း,စပါးသို့မဟုတ်အခြားအစေ့များကိုရိတ်သိမ်းသည်, ဒါကြောင့်ဂျုံမှုန့်အောင်အသုံးမပြုမီစပါးစက်ရုံ၏ကျန်ထံမှကွဲကွာရမည်ဖြစ်သည်. ဤခွဲထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုစပါးခွံဟုခေါ်သည်. ယနေ့စိုက်ပျိုးရေး၌တည်၏, စပါးခြွေလှေ့စက်ကိုစက်များဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာစိုက်ပျိုးရေးစက်ကိရိယာတွင်အတွေ့အကြုံရှိပြီးနောက်လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများသည်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များစွာကိုတီထွင်ခဲ့သည်။, ဆန်, ငရုတ်သီးစိမ်း, မုယောစပါး, Millet, စသည်တို့. sorgum ခြွေလှေ့စက်သည်ထိရောက်မှုရှိပြီးစပါးနှင့်ဂျုံစပါးများကိုကြိတ်ခွဲနိုင်သည်. sorgum ခြွေလှေ့စက်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းပုံ၏အင်္ဂါရပ်များရှိပါတယ်,လှပသောပုံသဏ္andာန်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစစ်ဆင်ရေး, မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုကြွက်,ကောက်ပဲသီးနှံအထွက်ကောင်းခြင်းနှင့်စပါးအနည်းငယ်ဆုံးရှုံးခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ စပါးခြွေလှေ့စက်သည်ရင့်ကျက်သောနည်းပညာနှင့်အတူလူကြိုက်များသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်. ကောက်ပဲသီးနှံနှံနှံသည်တောင်သူလယ်သမားများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်သည် ဘက်ပေါင်းစုံစပါးကို sheller မင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုအတွက်ကောင်းတယ်!
ထိန်သိမ်းနှံစားပြောင်းခြွေလှေ့စက်ထိန်သိမ်း၏ဖွဲ့စည်းထားသည်, ခွက်မျက်နှာပြင်, စည်, အဖုံး, အဓိကပန်ကာ, ဒုတိယစုတ်ယူခြင်းပန်ကာ, မော်တာသို့မဟုတ်ဒီဇယ်, တုန်ခါနေသောမျက်နှာပြင်, ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲ - မောင်းနှင် device ကိုနှင့်. ထူထဲသောအလုပ်လုပ်သည့်ပလက်ဖောင်းသည်၎င်းကို ပို၍ လုံခြုံစိတ်ချရစေသည်.
1.မြင့်မားသောစွမ်းရည်: ဤစပါးနှံစားပြောင်းခြွေလှေ့စက်သည်သီးနှံများကိုလွင့်စေပြီးသီးနှံဖြစ်ထွန်းစေရန်ပေါင်းစပ်ထားသည်, ဂျုံဖွဲ, ဂျုံကောက်ရိုးကိုတစ်ချိန်ကကွဲကွာစေခဲ့သည်. ကောက်ပဲသီးနှံများကိုထိရောက်စွာကောက်နယ်နိုင်သည်, ခွံများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုရောစပ်မှုမှဖုန်မှုန့်များကိုဖယ်ရှားပါ။ ဤစပါးခြွေလှေ့စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် ၂၀၀၀ မှ ၂၂၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိရောက်ရှိနိုင်သည်.
2.ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေး: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sorgum ခြွေလှေ့စက်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူမီးမောင်းထိုးပြနေသည်, လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေး, လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု,သိပ္ပံနည်းကျဒီဇိုင်းနှင့်သာလွန်အရည်အသွေး. အပြင်, ၎င်းသည်အက်စစ်ဆန့်ကျင်မှုဖြစ်သည်, သံချေးဆေး, နှင့်အစိုဓာတ်ကို proofed. တာဝန်တွေကအရည်အသွေးကောင်းတယ်, တစ်ခုချင်းစီကိုအညွှန်းကိန်းအမျိုးသားရေးသတ်မှတ်ချက်ရောက်ရှိခဲ့သည်.
3.အကုန်အကျသက်သာသည်: sorgum ခြွေလှေ့စက်သည်မြင့်မားသောဖယ်ရှားမှုနှုန်းနှင့်ကျိုးပဲ့မှုနိမ့်သောအားသာချက်များရှိသည်, ၎င်းသည်ရိတ်သိမ်းမှုကိုဖြေလျော့ပေးပြီးရိတ်သိမ်းချိန်လွန်ဆုံးရှုံးမှုများကိုထပ်မံလျှော့ချပေးပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်.
4.မြင့်မားသောလုံခြုံရေး: အဆိုပါမော်တာထိန်းချုပ်မှုလက်ရှိကျော်တပ်ဆင်ထားသည်, Overload နှင့်တိုတောင်းသော circuit ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး.
5.ပါဝါကျယ်ပြန့်ရရှိနိုင်ပါသည်, ထိုကဲ့သို့သောမော်တာအဖြစ်, ဒီဇယ်အင်ဂျင်,ဒါကြောင့်ဒီစပါးခြွေလှေ့စက်ဟာအာဖရိကမှာလူကြိုက်များတယ် ,အထူးသဖြင့်ပါဝါမရှိခြင်းareaရိယာသည်.
သင်၏ ၀ ယ်ယူမှုမှကြိုဆိုပါသည်.
(ကီလိုဂရမ် / နာရီ) 2000~ 2200
(kw / hp) 11kw motor